UBushiri usephinde waphuma futhi ejele – laseMalawi | Scrolla Izindaba
UBushiri usephinde waphuma futhi ejele – laseMalawi
AbakwaBushiri badedelwe ejele laseMalawi ngoLwesine ebusuku.
Ngokusho komthombo womsakazo wasembusweni eMalawi, iMantshi eNkulu uViva Nyimba iyalele ukuthi kudedelwe uShepherd Bushiri nomkakhe uMary ngemuva kokuchitha ubusuku ejele.
UBushiri nonkosikazi wakhe bazinikele kwabomthetho eMalawi ngoLwesithathu ngemuva kokweqa eNingizimu Afrika ngesonto eledlule ngesikhathi bededelwe ngebheyili ngamacala okushaqisa kanye nokukhwabanisa imali.
Impikiswano kaNyimba kusobala ukuthi ibisuselwa ebuchwephesheni bokuboshwa kwakhe – hhayi ebucikweni becala laseNingizimu Afrika.
AbakwaBushiri bekufanele bavele eNkantolo yeMantshi yasePitoli ngoLwesine.
Kodwa le nkululeko yabo ingeyesikhashana njengoba uNgqongqoshe wezoBulungiswa nokuHlunyeleliswa kweziMilo eNingizimu Afrika, uRonald Lamola ethe, iNingizimu Afrika iyalusheshisa uhlelo lokubuyiselwa kwabo ezweni.
“Silindele ukuthumela amaphepha okubuyiswa kwabo emasontweni amabili esikhundleni sezinsuku ezingama-30 ezibekwe yi-SADC.
“Usuku esizibekele lona ukuthi, njengoba siyisiphathimandla esiphakathi nendawo siyakuqonda ukuphuthuma kwalolu daba, ngakho-ke uma sesithumela lesi sicelo sizoxhumana nozakwethu eMalawi mayelana nezicelo esezishiwo emiqulwini,” kusho uLamola.